साहित्य Archives - radiomirmire-Radio Mirmire
बारुदको धुवामा मिश्रीत नभएको मेरो अतित
समयले पनि किन यसरि रुवाउदो रहेछ ? दुखिया र भुखियाहरुलाई आज ११ बसन्त पुरा भएछ । उनको यादले स्पन्दका कुना छिया–छिया पार्न थालेको । बोलाउदा अ‍ोय रितु…भनेको शब्द नसुनेको पनि कतिका बर्ष गएछन, कुनै......
राम मेरो सम्बोधनमा आश्चर्यचकित नहुनु बिष्मित नहुनु हटाऊ यी चिताका समिधाका रास लखेट तिम्रा साक्षीहरु तिम्रा महिमाको लागि तिम्रो लोकलाजको लागि सीता अब अग्नी परीक्षा दिन सक्दिन घाम शिर माथि लागेको छ फर्केर नहेर......
अशोक कुँवर ‘नेत्र’ गतिलो साँढे बस्तीको बिच भाग हिँड्दै छ– डुक्रँदै गर्दै फ्वाँफ्वाँ र स्वाँस्वाँ । साँढे बद्मास छ कहिले खान्छ किसानको बाली, घुरेनका सागपात कहिले सिँगौरी जोत्छ रैँदालो पार्छ धानको ब्याड साँढे बलियो......
उमेरले जति बुढी होलिन् त्यो भन्दा बढी नै फतक्क गलिसकेजस्ती कमजोर। एउटा हातमा सानो डब्बा। अर्को हातमा लट्ठी। धेरै नबोल्ने जस्ती। उनी भिजेको देख्दा मलाई केही सहयोग गर्न मन लाग्यो। समातेर ओततिर ल्याएँ। बुढीआमाले......
बाहिर भीषण गोलाबारी हुँदै थियो । “ओस्कर रोमियो…… ओस्कर रोमियो….सेरा नाइन कलिङ्ग…ओभर ।” रेडियो सेटमा कल गर्ने जवानको मुख सुकि सकेको थियो । अर्को तर्फबाट कुनै जवाफ......
कुरुप काठमाडौं: राजधानी उर्फ लाजधानी !
भिन्न स्रोतहरुले नेपालको राजधानी ‘काठमाडौं’ एशियाको पहिलो र विश्वको तेस्रो प्रदूषित सहर भनेर पुष्टि गरेका छन् । नांगो आँखाले हेर्दा यहाँको वायुमण्डल निकै धमिलो देखिन्छ । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका मानिसले आँखा पिरो हुने,......
चित्रबहादुर केसीः घुस नलिने मन्त्री
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर के.सी. को सरकारमा भूमिका नेपालको राजनीतिक इतिहासको नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र एक प्रकारले अद्वितीय उदाहरण हो । उपरी र प्रकट रूपले......
बिरामी कुरुवाले जे देखें, त्यही लेखें
लामो समय भयो वीर अस्पतालमा बिरामी कुरुवाको रुपमा बसेको । वीर अस्पतालको फिमेल सर्जिकल वार्डको बेड नम्बर २६० मा पित्त थैलीको अप्रेशन गरेकी मेरी आमालाई स्लाइन दिएर राखिएको छ । टेलिभिजनको कामले ०७२ सालको......